DavidBridburg စက်တင်ဘာလ 4, 2020 မတ်လ 23, 2021
၁၀ ထူးခြားသောပန်းများပန်းချီကားများ David Bridburg မှရေးဆွဲသည်
စီမံကိန်းအသစ်တစ်ခုစတင်ခြင်းသည်စိတ်ပျက်စရာကောင်းနိုင်သည်။ ငါနားလည်တယ် အမှုအရာသေးငယ်တဲ့သို့အပိုင်းပိုင်း။ အဲ့တာကိုရိုးရှင်းအောင်ထား။ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုအခြားတစ်ခုရှေ့မှာထားပါ။
ငါလုပ်ခဲ့တယ်။ ယခုနှစ်အနည်းငယ်အကြာ၌အနုပညာလက်ရာ ၄၀၀ နီးပါးရှိသည်။ အစပြုသူမှကျွမ်းကျင်သူအထိပန်းပွင့်များသည်ပန်းချီကားရန်လွယ်ကူသောမှ ပို၍ ရှုပ်ထွေးသည်အထိသွားခဲ့သည်။
ငါ့ဇာတ်လမ်းကအရမ်းကွဲပြားခြားနားတယ်။ ဒါနဲ့ငါ့အနုပညာကအရမ်းကွဲပြားတယ်။ ထိုအခါငါနေဆဲထိုင်ပါဘူး။ ငါလုပ်ရမယ့်အမှုဆယ်ခုကမင်းကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။
ကျွန်တော့်နာမည်က David Bridburg ပါ ကျွန်ုပ်သည် Post Modern Modern အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ ငါ့သမိုင်း မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်ပါဝင်သည် ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာသည်အာရုံအပြောင်းအလဲမြန်သောရောဂါဖြစ်သည်။ သင်၌သင်ယူမှုအခက်အခဲအချို့ရှိသောမိသားစု ၀ င်တစ် ဦး သို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကောလိပ်မှာရှိတဲ့အနုပညာထဲမတော်တဆကျသွားတာကိုကျွန်တော်အဲဒီသင်တန်းမှာတက်ရတာပျော်တယ်။ ရေမြှုပ်လိုမျိုးသင်ခန်းစာတွေကိုစိမ်လိုက်တဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရမ်းတောင်းဆိုလာတယ်။ အဓိကပါမောက္ခကကြိုက်တယ်။
သင်ခန်းစာများသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဲဒီတုန်းကငါမသိခဲ့ဘူး။ ငါဖန်တီးမှုကိရိယာများနှင့်မျှမစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပေးအပ်ခံခဲ့ရသည်။
နယူးယောက်စီးတီး၏အနုပညာလောကကိုသင်ကြည့်လိုက်လျှင်၎င်းသည်အလွန်လက်တွေ့မကျကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ မေးစရာပေါ်လာတယ်၊ အကယ်လို့မင်းဒီဟာကိုတနည်းနည်းနဲ့နံရံပေါ်မှာဆက်နေမှာလား။
ငါသည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ငါ့အထုတ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် သဘောတရားအရငါမူရင်းအတွေးအခေါ်များနှင့်အတူလယ်ပြင်နေ့က flush ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၏သင်တန်းမူရင်းစိတ်ကူးများသည်ငါ၏အကျင့်ကိုကျင့်၏တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဒီဂရီအမျိုးမျိုးမှဖြစ်ကြသည်။
ဤပုံများသည်ပန်းများပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပြန့်ကျဲနေသောပန်းများကိုအလွယ်တကူ ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်အနေဖြင့်ကြည့်ပါ နှင်းဆီပန်းနှင့်ပန်းများ စုဆောင်းမှု။
ဗန် Gogh တစ်ခုမိတ်ဆက်
16 ဗန် Gogh ကို David Bridburg မှရောစပ်ပါ
Vincent van Gogh ၏ဤကျော်ကြားပြီးလှုံ့ဆော်မှုခံရသော Roses and Irises ကိုသင်သိကောင်းသိပေမည်။ ငါအပိုင်းအစကိုချစ်။
Post Modern Modern အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပန်းတွေပန်းချီကားတစ်ချပ်ကိုအသုံးပြုပြီးငါလုပ်ခဲ့ရတယ်။ ပန်းချီကားကိုခေတ်မီစေရန်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ကြိုးစားရန်၊ ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ရန်ရဲဝံ့သည်လော။ မင်းကတရားသူကြီးပဲ။
သငျသညျအမြားစုကဒီကိုချစ်ကြလိမ့်မည်။ လူအများစုကကျွန်တော့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ပြီးငါ့အနုပညာကိုအရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ ဒါကအချက်ပါပဲ။ လုံးဝအသစ်က ဦး တည်ချက်အတွက်ပယ် Going စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ပါတယ်။
ငါလမ်းကြောင်းသစ်အပေါ်အလုပ်လုပ်ငါ့ကောလိပ်အတန်းထဲတွင်ထိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှာဘွဲ့ရတော့အဲဒီစိန်ခေါ်မှုအသစ်ကိုငါစဖွင့်လိုက်တယ်။
နောက် Gauguin နှင့်မမျှော်လင့်ဘဲ
မင်းအရင်ကမမြင်ဖူးပေမယ့်ပေဂူဂူအန်ပန်းချီကား ၁၅ လုံးကိုတစ်ပွင့်ပွင့်အနေနှင့် fit ရန်အသုံးပြုသည်။
Montague ဆိုတာဘာလဲ ... အို, အခြားအမည်ကိုဖြစ်!
သူ Romeo call'd မဟုတ်လျှင်,
အဲဒီခေါင်းစဉ်မရှိရင်။ "(Romeo နှင့် Julietအက်ဥပဒေ II၊ မြင်ကွင်း ၂၊ လိုင်း ၃၈-၄၉)
ဤပုံကိုနှိပ်ပါဆိုပါကကျွန်ုပ်ပန်းပွင့်များနှင့်နှင်းဆီပန်းစုဆောင်းခြင်းတွင်သင်ရောက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုလိုသောကျွန်ုပ်၏“ Gauguin နှင်းဆီ” ဗားရှင်းသုံးမျိုးရှိသည်။ သင်ဒီမှာကော်ဖီတစ်ခွက်လောက်စုဆောင်းမှုတစ်ခုလုံးကိုအနားယူပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
David Bridburg မှ Gauguin ၏နှင်းဆီ
Post Modern ဆိုတာဘာလဲ။
Postmodernism ကိုသတ်မှတ်ရန်အရိုးရှင်းဆုံး၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောနည်းလမ်းမှာအရာရာကိုယခင်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အတိတ်မှယူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးသည်။ ၎င်းသည်ဝိရောဓိဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကဒီနေ့တီထွင်မှု။
ဗင်းဆင့်ဗန် Gogh ချဉ်းကပ်
ဗန်ဂိုးသည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးအနုပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ သူ၏လက်ရာများကိုပြုပြင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်နောက်ကွယ်ရှိအဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်သည်။
Vincent van Gogh သည်သူ၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးတွင်သူ၏ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကိုတစ်ခါမျှရောင်းချခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ဤတွင်အင်တာနက်သည်ကျွန်ုပ်၏အတွေးများကိုရောင်းရန်ကူညီသည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အစောပိုင်းနှစ်တွေဟာအာရုံစူးစိုက်မှုပြwithနာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်အနုပညာဖန်တီးခြင်းနဲ့ရောင်းချခြင်းကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားမိပါ။
အမျိုးမျိုးသောအလုပ်များကိုဖန်တီးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ မင်းဘာကိုချစ်မှာလဲဆိုတာမသိဘူး လူတွေ ၀ ယ်ထားတဲ့ပုံနှိပ်စာအုပ်တချို့ဟာဘယ်တော့မှရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။ ငါထင်ပေါ်ကျော်ကြားလိမ့်မည်ဟုထင်သောအခြားအရာတို့ကိုဘယ်တော့မှမရောင်းဘူး။ သင်သာအနုပညာလက်ရာတစ်ခုတွင်သင်မြင်တွေ့ရသောအရာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ဒီဟာရောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ် အခြားအနုပညာရှင်တွေကဒီဟာအရမ်းလှတယ်လို့ငါ့ကိုပြောခဲ့တယ်။ အနည်းငယ်သောပုဂ္ဂိုလ်များကအံ့သြစရာပါပဲငါ့ကိုပြောနှင့်ပြီ။ အဘယ်သူမျှမကိုက် nibbles ။
သေးငယ်။ ထူးဆန်းစွာပုံသွင်းထားသောအပိုင်းအစများသည်တစ်ခုလုံးကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကပုံဆောငျအနုပညာလက်ရာများမှကြွလာသောအခါ၌ပင်။
သင်အဆင်ပြေထိုင်။ ဤအကျင့်ကိုကျင့်ခံစားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါငါလိုချင်တာပဲ ဤ blog သည်စာဖတ်ခြင်းကိုလွယ်ကူစေရန်ရည်ရွယ်သည်။
ပြောရမယ်ဆိုရင်ငါ abstraction ကိုပြောမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ van Gogh ရဲ့ abstraction ကနေကွန်ပျူတာ pixel abstraction အထိလာတာကဒါကငါ့ရဲ့ tools တွေပါ။
David Bridburg မှသီချင်းများ 3
ငါကြည့်လို့ရတယ်ငါတစ်ခုတည်းအရောင် palette ရှိသည်မဟုတ်။ Post Modern Art တွင်အရောင်သီအိုရီမရှိပါ။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့လမ်းညွှန်မူတစ်ခုကတော့အရောင်တစ်ခုစီရဲ့တန်ချိန်တွေကိုပေးထားတဲ့အပိုင်းတစ်ခုနဲ့ကိုက်ညီဖို့ပဲ။
ပန်းများကိုစိတ်ဝင်စားမှုနှင့်အတူသင်ပိုမိုစမ်းသပ်အသုံးအနှုန်းများကိုကြည့်ရန်ဤဘလော့ဂ်သို့လာသည်။ သို့သော် tulip တစ်ခုသည် tulip ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။
သင့်ရဲ့ရောင်စုံ fluted ရှမ်ပိန်ဖန်ခွက်။ ငါပန်းပွင့်၏အနှစ်သာရသို့ရပေမယ့်ယခုအဘယ်သူမျှမ genus မရှိ။
David Bridburg မှပန်းပွင့် ၂
ဒီ abstraction သုံးခုရဲ့သေးငယ်တဲ့စီးရီးကွန်ပျူတာအားနည်းချက်ကိုနှင့်အတူစမ်းသပ်။ သို့သော်လည်းဒီဂျစ်တယ်ကိရိယာသည်အလွန်တိကျသည်။
ကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးပုံဆွဲအတန်းဟာချောင်ချောင်ချောင်ဖြစ်လာဖို့အာရုံစိုက်ခဲ့တယ် ပုံကိုဖွဲ့စည်းရန်ပခုံးမှလက်မောင်းကိုရွှေ့ခြင်း။ လက်ကောက်ဝတ်ဆန့်ကျင်သည်။
အစိမ်းရောင်အိမ်တစ်လုံးကိုတွေ့ပြီ။ ကျနော်တို့စိမ်းလန်းသောဂြိုဟ်ပေါ်တွင်နေထိုင်ကြသည်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှအစိမ်းရောင်အရိပ်အရောင်ပြောင်းလဲသည်။
ဤအစိမ်းရောင်အရိပ်သည်ထူးခြား။ “ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းကလား။ ပန်းပွင့်စွမ်းအားလား” ကောင်းပြီ၊ အဘယ်သူမျှမကဤအစိမ်းရောင်ယခုမှထူးခြားသည်။
ဒီပုံကိုသင်ဘယ်လိုရိပ်မိသလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပါ။ ကျနော်တို့တစ် ဦး ချင်းစီကွဲပြားခြားနားအရောင်ကိုကြည့်ပါ။
ငါ puddy tataw tawt ငါ tawt ငါပြုခဲ့တယ်၊
David Bridburg မှလေထဲတွင်ပန်းပွင့်များ
ငါသည်သင်တို့ကို serendipitous ပေးပါ။ စင်ကြယ်သောကစားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပြူတာပုံရိပ်ဖြင့်မည်သူမျှမလွတ်နိုင်ပါ။
လေပြေသည်သင့်ကိုဆွဲတင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဒီပုံကိုစိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်။ သူမသည်နည်းနည်း furry felines များအတွက်လိမ္မော်ရောင်ပုံစံမျိုးစုံမှာအဆုံးမဲ့ကြည့်။
သူမသည်ငါ၌အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သည်။ သူမသည်သူမ၏မီးဖိုမှဖြတ်ပြီးမြို့ရိုးပေါ်မှာဒီပုံရိပ်တွေ၏ 48″ ပတ္တူဆွဲထားကြ၏။ Pre Covid, သူမ၏သူငယ်ချင်းများကပန်းပွင့်ကိုညွှန်ပြလျက်“ ကြောင်လား” ဟုရပ်ပြီးပြောလိမ့်မည်လော
တုန့်ပြန်ချက်ကတော့“ သူမကြောင်ဟုတ်လားဆိုတာကိုသူသာသိတယ်” မျက်လုံးများမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြင့်။
သူမရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဒီပုံကို ၀ ယ်ဖို့ကျနော့်ဆိုက်ကိုသွားတယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်တစ်ခုငါပြမယ့်အရာကိုဝယ်လိုက်တယ်။
သငျသညျဤ၌ငါ့ brushstrokes တွေ့နိုင်ပါသည်။ ငါဆေးထိုးတယ် အပိုထိန်းချုပ်မှုသည်ကျွန်ုပ်၏အနုတ်လက္ခဏာနေရာ၏အရောင်ဖြစ်သည်။
David Bridburg မှအနီရောင်ပန်းများ
အနုပညာရှင်လိုမဟုတ်ဘဲ Dave လိုပြောခြင်းဟာဒီအပြာရောင်ဟာကျွန်တော့်ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ။ ငါဝင်ချင်သောအရာကိုသိသောကြောင့်, အရောင်တွေကိုငါပတ်ပတ်လည်ကောက်ဖို့မလိုပါ။
ဒါဝိဒ်သည် Bridburg အားဖြင့်ပျက်စီးလွယ်
"တစ်မိနစ် Mister အပေါ်ကိုင်! ဒါတွေဟာပုံတူတစ်ခုတည်းပဲ။ ” အခုမင်းပြောနေတာကိုငါကြားနိုင်ပြီ။
ဟုတ်တယ်၊ မင်းကိုငါအပြစ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံတယ် ဟားဟား
Fragile ကိုပိုမိုဂရုပြုပါ၊ နှိပ်ခြင်းကကျွန်ုပ်၏ရောင်းဝယ်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှိပုံရိပ်မြင်ကွင်းကိုပေါ်စေသည် သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်ဗေဒအရည်အသွေးရှိပါသည်။ မီးခိုးရောင်များသည်နွေးကြသည်။
ဒါနဲ့နောက်ဆုံးမင်းကိုငါထားခဲ့ပါ ဦး မယ်။
David Bridburg ၏သေခြင်းမှဘဝ
ငါ့အဖေကဒီပုံကိုချက်ချင်းသဘောကျတယ် ဘဝအကြောင်းကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတစ်ခုခု။ ငါ့အဘို့ဆုလာဘ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါ Vincent van Gogh's Roses and Irises ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်လည်ပြုပြင်သည် ဤပုံသည် ပို၍ ကြီးမားသောဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
တည်းဖြတ်ခြင်းသို့ပြန်လာပြီးသင့်အားအကြံပေးချက်အချို့ပေးသည်။ အဖေသည်ကျွန်ုပ်ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြခံရခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ အမေက“ လေထဲမှာပန်းတွေ” ကိုကြောင်တွေနဲ့ ၀ ယ်ချင်တယ်။ မေမေကခွေးတစ်ကောင်ပါ။ ဒါကကျွန်မကိုအရမ်းအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်၏အတွေးအခေါ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုတွင်နက်ရှိုင်းစွာဆက်နွယ်နေသည်။ အနုပညာအတွက် ၀ ယ်မယ်ဆိုရင်သင်စိတ်ကူးအသစ်ရချင်လိမ့်မယ်။ ဤနေရာတွင်အောင်မြင်မှုသည်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း၊ အနုပညာနှင့်ဘဝပြန်လည်သက်ဝင်မှုဖြစ်သည်။
အနုပညာ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေးအခေါ်များ၊ မူလပန်းချီကားများတွင်ထူးခြားသောယဉ်ကျေးမှုရေတွက်မှုရှိသည်။ Artworld သည်မကြိုက်သည်ဖြစ်စေပြတိုက်ကမ္ဘာတွင်ပြိုကွဲခြင်းမှဖြစ်ပျက်နေသည်။ ဒီပန်းချီကားတွေဟာဒီဂျစ်တယ်အနုပညာကိုဘယ်လိုရောင်းရမယ်ဆိုတာအရှုံးပေါ်နေပါတယ်။
ချဉ်းကပ်နည်းသည်အနုပညာရှင်အတွက်နွားကိုချိုဖြင့်ခေါ်။ ပခုံးပေါ်အသာပုတ်။ “ ငါရှိပြီ” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ကျွန်မရဲ့ဆောင်းပါးတွေရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေကနွေးထွေးပြီးအထောက်အကူဖြစ်ခဲ့တယ်။
စုဆောင်းသူအချို့အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ဝယ်ယူမှုစေပြီ။ နယူးယောက်စီးတီးရှိစုံတွဲတစ်တွဲက“အမေရိကန်ပညာတတ် 6သူတို့ရဲ့ ago ည့်ခန်းအဘို့ "နှစ်ပတ်အကြာ။ အဆိုပါအပိုင်းအစလူမျိုးရေးတန်းတူညီမျှမှုများအတွက်အလွန်စိတ္တဇကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်လုံးဝတယ်။ အဆိုပါပုံနှိပ်တစ်ခု 84″ ပတ္တူနံရံသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်ပုံနှိပ်ခြင်းကို ၈ at မှ ၁၀၈ to အထိအထိတိုးနိုင်သည်။ 8″ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများကသူတို့နေရာနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်။
စကားမစပ်, American Intelligence Collection သည် Post Pop အနုပညာလက်ရာများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ရေးဆွဲထားသောစုဆောင်းထားသောပစ္စည်းများအားလုံးအတွက်အလွန်ကျယ်ပြန့်သောအမျိုးအစားမှာ Postmodernism ဖြစ်သည်။
သင့်ကိုစိတ်ကူး၊ ခံစားချက်နှင့်အဆင့်မြင့်အနုပညာအနုပညာကိုကျွန်ုပ်နှင့်အခြားအနုပညာရှင်များ၏အွန်လိုင်းတွင်ရနိုင်သည်။ သင်စိတ်ဝင်စားသောသင်၏ဘဝပုံစံနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗေဒကိုသင်ရှာနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိပုံရောင်းအားစာမျက်နှာကိုကြည့်ရှုရန်သင့်စိတ်ကူးပုံ၏မည်သည့်ပုံကိုမဆိုနှိပ်ပါ (အပေါ်ဘက်ရှိအဖုံးပုံနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ) ။
မေးခွန်းမေးခွန်း - ဒါတွေအားလုံးပြီးပြီလား။ အဖြေများကသင့်ကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်သည်။
က Canvas Printခေတ်သစ်ပြခန်းတင်ပါပိုစတာများ